Fiidiyowga: Qaybta 2 oo leh Kevin Lee on nofollows, 302 dib-u-hagaajin, nuxur summadeysan | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Fiidiyowga: Qaybta 2 oo leh Kevin Lee oo ku yaal nofollows, 302 dib-u-hagaajin, nuxur calaamadeysan
Fiidiyowga: Qaybta 2 oo leh Kevin Lee oo ku yaal nofollows, 302 dib-u-hagaajin, nuxur calaamadeysan
Qayb ka mid ah wareysiga aan la yeeshay Kevin Lee, waxaan ka hadalnay sababta PR digital ay fure u tahay guusha SEO. Qaybta labaad, waxaan dabooli doonaa dhul badan oo qoto dheer oo qoto dheer oo su'aalo ah hareeraha haddii xiriiriyeyaasha nofollow iyo 302 ay u gudbiyaan calaamadaha Google. Google run ma sheegaa marka ay tiraahdo 302 redirects baa soo mara ama maya?
Waxaan sidoo kale ka hadalnaa muhiimada ay leedahay nuxurka calaamadeysan iyo doorka ay ku leedahay SEO iyo raadinta organic.
Kevin iyo aniga waxaan dib u xasuusanay maalmihii hore ee suuqgeynta xiriirka iyo sida qaar ka mid ah aaladaha xiriirka la bilaabay si loo gudbiyo xiriirinta tooska ah iyo calaamadaha faa'iidada SEO.
Ugu dambeyntii, waxaan waydiiyay Kevin waxa adag, samaynta SEO ama samaynta PPC ee macaamiisha. Jawaabtiisa waan kuu sheegi lahaa laakiin waxaan rabaa inaad daawato muuqaalka si aad jawaabta u ogaato.
Waxaan bilaabay taxanahan vlog dhawaan, oo haddii aad rabto inaad saxiixdo si laguugu wareysto, waxaad buuxin kartaa foomkan Wareegga Raadinta. Waxa kale oo aad ku biiri kartaa kanaalkayga YouTube adigoo gujinaya halkan. Waxaan hadda raadinayaa inaan ku sameeyo bulsho ahaan fog, waraysiyo ka baxsan NY/NJ aagga tri-state.